Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska...
Farmaajo oo waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waraaqaha aqoonsiga danjiranimo ka guddoomay Safiirka cusub ee Boqortooyada Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Marwo Kate Foster.
Danjire Kate oo Madaxweynaha soo gaarsiisay salaan iyo farriin ay uga sidday Boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth ayaa ka mahadcelisay soo dhaweynta diirran, waxa ayna soo bandhigtay sida ay uga go’an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in ay ka go’an tahay Dowladda Federaalka Soomaaliya xoojinta xiriirka diblumaasiyaddeed ee ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi.
Previous articleWar deg deg ah: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi oo goordhow ku geeriyooday magaalada Nairobi
Next articleTaariikh nololeedkii Madaxweyne Cali Mahdi Alle ha u naxariistee.
Golaha Musharixiinta oo Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku tilmaamay dambiile Qaran
Golaha Musharixiinta ayaa ku timaamay madaxweynaha Waqtigiisa dhamaaday in uu yahay shaqsi ku tuntay sharciga uuna yahay Danbiile dagaal. Golaha ayaa intaasi kusii daray in...
Dowlada uu hada Hogaamiyo Farmaajo oo lagu tilmaamay Mid fowdo iyo...